Imishado – iAfrika
Amaphupho ngendandatho yomshado
Uma uphupha ukuthi ulahlekelwe indandatho yakho yomshado kusho ukuthi awusamthandi umyeni noma unkosikazi wakho. Amaphupho ngokucela umshado. Amaphupho ngobucwebe obuqgokwayo. iAfrika
Tags Imishado, Izindandatho
Amaphupho ngezimbali zasemshadweni
Uma uphupha ukuthi uphethe izimbali zikamakoti kusho ukuthi uzoshada maduzane. Uma uzitshinga noma uzilahla kusho ukuthi ngelinye ilanga uzoba nedivosi. Amaphupho ngezimbali. Amaphupho ngomcimbi womshado. iAfrika
Tags Imishado, Izimbali
Amaphupho ngokucela umshado
Uma uphupha ukuthi kukhona okucele umshado kusho ukuthi abantu bayakuqonda futhi bazokuphatha kahle. Amaphupho ngendandatho yomshado. Amaphupho ngokuthembisa umshado. iAfrika
Tags Amalobolo, Imishado
Amaphupho ngokuthembisa umshado
Uma uphupha ukuthi wena noma abangani bakho nithembisa umshado akukuhle futhi akukubi. Kusho nje ukuthi awuzukuba nenhlanhla enhle noma ibhadi maduzane. iAfrika
Amaphupho ngomakoti, umkhwenyana noma impelesi
Uma uphupha ukuthi ungumakoti ungumkhwenyana noma uyimpelesi kuyibhadi futhi uzobhekana nosizi ukhale izinyembezi maduzane. Uzolwa nophathina wakho futhi ubudlelwane benu buzophela. Amaphupho ngomcimbi womshado. iAfrika
Tags Imishado, Izimpelesi
Uma uphupha ukuthi uyashada kuyibhadi ikakhulukazi kwabesilisa. Kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima empilweni yakho maduzane. Uma omunye wabantu ephusheni lakho begula noma bekhubazekile kusho ukuthi uzoba nomshado ongenayo injabulo. Kuyinhlanhla kuphela uma umuntu wesifazane eziphupha eshada nekhehla. Amaphupho ngomshado nomuntu ongasekho. Amaphupho ngamakhekhe. Amaphupho ngezimbali zasemshadweni. Amaphupho ngomakoti, umkhwenyana noma impelesi. iAfrika
Tags Imicimbi yesintu, Imishado